5 Bhenefiti: Kukwikwidzana Kubatsira kweBig Data muBhizinesi - NewGenApps
Big Data zvinoreva chikamu chikuru che data mbishi inounganidzwa, kuchengetwa nekuongororwa nenzira dzakasiyana siyana dzinogona kushandiswa nemasangano kuwedzera kugona kwavo uye kutora sarudzo dziri nani. Big Data inogona kuva mune zvese - zvakarongwa uye zvisina kurongeka mafomu. Structured Data inonyanya kuongororwa uye kurongeka mu Database. Unstructured Data, kune rumwe rutivi, yakanyanya kuoma kuongorora uye inoshandisa akasiyana mafomati. Zvakare, haisi nyore kududzirwa nemaitiro echinyakare data uye maitiro.
Unoda kuva nemufananidzo wakajeka we Big Data? Dhawunirodha eBook yemahara nhasi:
Pfungwa Big Data hapana chitsva. Muchokwadi, makambani mazhinji, makuru nemadiki, ari kushandisa big data uye yakanamatira ongororo nzira senzira yekuwana ruzivo rwakawanda kuti vatsigire kambani yavo uye kushandira vatengi vavo, vachibatsirwa kubva kune zvakanakira big data.
3 Vs YeBig Data:
Big Data ndiko kusanganiswa kwezvinhu zvitatu izvi; High-volume, High-Velocity uye High-Variety.
Big Data inocherekedza uye inoteedzera zvinoitika kubva kwakasiyana siyana zvinosanganisira bhizimisi zviitiko, evanhu vezvenhau uye ruzivo kubva kumuchina-kuenda-kumuchina kana data re sensor. Izvi zvinogadzira yakawanda mavhoriyamu e data.
Iyo hova dhata mune yekumhanyisa kumhanya uye inofanirwa kugadziriswa nenguva. Iko kugadziriswa kwedata ndiko kuti, kuongororwa kweakafambiswa dhata kuburitsa padyo kana chaiko nguva mhedzisiro zvakare kuri kukurumidza.
Dhata rinouya mune ese mafomati angave akaumbwa, manhamba mune yechinyakare Database kana iwo asina kurongeka zvinyorwa zvinyorwa, vhidhiyo, odhiyo, email, stock ticker data.
Read More: Matanho manomwe: Maitiro Ekugadzira Yakabudirira Big Data Strategic
Nei Big Data Yakakosha?
Kukosha kwe big data haina kutenderera pamusoro pekuti ingani data rine kambani asi kuti kambani inoshandisa sei data rakaunganidzwa. Kambani yega yega inoshandisa data nenzira yayo; kana kambani ichishandisa zvakanyanya data yayo, ndiko kuwedzera kwainofanirwa kukura. Iyo kambani inogona kutora data kubva kune chero kwainopi uye kuiongorora kuti iwane mhinduro dzinogonesa:
Mari Kuchengetedza: Zvimwe zvishandiso zve Big Data kufanana neHadoop uye Cloud-Based Analytics inogona kuunza mari zvakanakira bhizimisi apo huwandu hwakawanda hwe data hunofanira kuchengetwa uye zvishandiso izvi zvinobatsirawo mukuona nzira dzakasimba dzekuita bhizimisi.
Nguva Kuderedzwa:Yekumhanyisa maturusi senge Hadoop uye mu-ndangariro analytics inogona kuona zviri nyore kutsva kwedata iyo inobatsira mabhizinesi kuongorora data nekukasira uye kuita sarudzo nekukurumidza zvichienderana nekudzidza.
New Product Development : Nekuziva mafambiro ezvido zvevatengi uye kugutsikana kuburikidza analytics unogona kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Nzwisisa mamiriro emusika: Nokuongorora big data iwe unogona kuwana kunzwisisa kuri nani kwezvino mamiriro emusika. Semuenzaniso, nekuongorora maitiro evatengi ekutenga, kambani inogona kuona zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya uye kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nemaitiro aya. Neizvi, inogona kuenda mberi kwevakwikwidzi vayo.
Chengetedza mukurumbira pamhepo: Maturu makuru ekushandisa Unogona kuita manzwiro ongororo. Naizvozvo, iwe unogona kuwana mhinduro yekuti ndiani arikuti chii nezvekambani yako. Kana iwe uchida kutarisa uye kugadzirisa kuvepo kwepamhepo kweako bhizimisi, big data maturusi anogona kubatsira mune zvese izvi.
Mhedziso: Big Data-A Makwikwi Anobatsira Mabhizinesi
Kushandiswa Big Data zvave kuitika mazuva ano nemakambani kuita zvekupfuura vamwe vavo. Mumaindasitiri mazhinji, vakwikwidzi varipo uye vatsva vanopinda zvakafanana vachashandisa nzira dzinobva kune yakaongororwa data kukwikwidza, kugadzira uye kutora kukosha.
Big Data inobatsira masangano kugadzira mikana mitsva yekukura uye zvikamu zvese zvitsva zvemakambani anogona kusanganisa uye kuongorora data remakambani. Aya makambani ane ruzivo rwakakwana nezve zvigadzirwa nemasevhisi, vatengi uye vanotengesa, zvavanofarira zvevatengi zvinogona kubatwa uye kuongororwa.
Inonzwisisa zvakare uye inogonesa bhizimisi maitiro. Vatengesi inogona kugadzirisa zvirinani stock yavo zvichibva pa fungidziro mamodheru yakagadzirwa kubva ku evanhu vezvenhau data, kutsvaga kwewebhu maitiro uye mamiriro ekunze.
Rega nyanzvi dzedu dzikutungamirire mberi pamabhenefiti makuru ekushandisa Big Data inotsanangurwa zvakananga zvakatenderedza yako bhizimisi muenzaniso.